၀ င်းဒိုးတွင်အကောင်းဆုံး SSD စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
မေလ 16, 2021 မေလ 13, 2021 နယူးယောက်မြို့ ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, နည်းပညာ
Windows နှင့်တပ်ဆင်ထားသောပရိုဂရမ်များသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်း (သို့) Freeware သုံး၍ HDD ကို SSD သို့အဆင့်မြှင့်ပါ။
BIOS ထဲက AHCI Mode ကိုဖွင့်ပါ။
Write Cache ကို Enable လုပ်ပါ။
ယခုအချိန်တွင် SSD သည် Windows နှင့်မြန်ဆန်ရန်လိုအပ်သည့်ပရိုဂရမ်များအတွက်ရိုးရှင်းသော HDD ထက်များစွာမြန်သည်။ ထို့ကြောင့်မြန်ဆန်စွာရှာဖွေလိုသူများပြားလာသောကြောင့် HDD ကို SSD သို့အဆင့်မြှင့်ရန် (သို့) SSD တွင် ၀ င်းဒိုးနှင့်ပရိုဂရမ်များသုံးရန်စီစဉ်သည်။ ပြီးနောက် SSD သည်သေးငယ်ပြီးစျေးနှုန်းမြင့်မားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည် Amazon ၌ 90GB internal SSD ၀ ယ်ရန်ဒေါ်လာ ၉၀ ကျသင့်ပြီး၎င်းနှင့်မြန်နှုန်းကိုတင်းကြပ်စွာလိုအပ်သောပရိုဂရမ်များကိုသာသုံးနိုင်သည်။
Windows တွင်အကောင်းဆုံး SSD စွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန်အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များ -
သင်၏ HDD ကို SSD သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါသလား။ အကယ်၍ ဟုတ်လျှင်ဤစာကိုဆက်ဖတ်ရှုပါ၊ အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး SSD မှအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေမည့်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုငါပြမည်။
သိကောင်းစရာ ၁ - Windows နှင့်တပ်ဆင်ထားသောပရိုဂရမ်များသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်း (သို့) Freeware သုံး၍ HDD ကို SSD သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
Windows နှင့် install လုပ်ထားသောပရိုဂရမ်များကို SSD သို့လွှဲပြောင်းရန်သို့မဟုတ် HDD ကို Clone သို့ SSD သို့လွှဲပြောင်းရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ သငျသညျအစပြုသူဖြစ်ပြီးလွယ်ကူသောရလွယ်ကူသော်လည်း transfer OS အတွက်စွမ်းရည်များများရလိုပါကသင်မှားမည်မဟုတ် MiniTool partition ကို wizard ကို.
အဆင့် ၁ - MiniTool Partition Wizard ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ၊ အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့ interface ကိုရဖို့ပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့် ၂ - OS ကိုပြောင်းပြီး SSD သို့ပြောင်းရန်အစီအစဉ်များကိုရွှေ့ပြောင်းပါက“ Migrate OS to SSD / HD Wizard” ကိုရွေးပါ။ သို့သော် HDD တစ်ခုလုံးကို SSD သို့ကူးယူပါ၊ တိုက်ရိုက် HDD ကိုရွေး။ “ Copy Disk” ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီမှာ Windows ဥပမာ SSD ကိုပြောင်းတာ။
အဆင့် ၃: Windows သို့ပြောင်းရန် SSD ကိုရွေး။ “ Next” ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၄ - ကူးယူခြင်းနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီး“ ရှေ့သို့” ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၅။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်“ Finish” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၆: အပြောင်းအလဲအားလုံးကိုအသုံးပြုရန်“ Apply” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
System ရွှေ့ပြောင်းခြင်း (သို့) Disk Clone အကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်နောက်ထပ်ဖတ်ရန်: Windows ကို SSD သို့မြန်မြန်ပြောင်းပါသို့မဟုတ် HDD ကို SSD သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
ထို့နောက် SSD ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်အကြံပြုချက်များအကြောင်းပြောကြစို့။
ထိပ်ဖျား ၂: အခန်းကန့်များ align
Windows ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်သို့မဟုတ် HDD ကို SSD သို့ကူးယူပြီးနောက်၊ partitions များကို align လုပ်ရန်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုံတူပွားလိုက်သောအခန်းကန့်များသည်အမြဲတမ်းညှိနှိုင်းထားသော်လည်းပုံတူကူးယူထားသောအခန်းကန့်များသည်လွဲမှားစွာသတ်မှတ်ရန်လွယ်ကူသည်။ မှားယွင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောအခန်းကန့်များနှင့်အတူ Windows နှင့်ပရိုဂရမ်များသည်နှေးကွေးလိမ့်မည် ထို့အပြင် read-write speed ကိုလည်းလျှော့ချလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး စွာ MiniTool Partition Wizard ကိုပြန်ဖွင့်ပြီး interface ကိုရယူပါ။
SSD ကိုရွေးပြီး Allign All Partitions ကိုရွေးပါ။ လွဲမှားသောအခန်းကန့်များရှိနေသည်ကိုပရိုဂရမ်မှတွေ့ရှိပါက၊ မည်သည့်အခန်းကန့်များအားချိန်ညှိသင့်သည်၊ လုပ်ငန်းအားလုံးကိုဆိုင်းငံ့ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများအဖြစ်ပြုလုပ်သင့်ကြောင်းပြောပြလိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်၊ “ Apply” ခလုတ်ကိုသင်နှိပ် သ၍ လျှို့ဝှက်နံပါတ်များကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိလိမ့်မည်။
သိကောင်းစရာ ၃ - BIOS တွင် AHCI Mode ကိုဖွင့်ပါ
ဒီ feature ကို enable လုပ်ခြင်းဖြင့် IDE mode ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်ပိုမိုမြန်ဆန်သော data transfer နှုန်းကိုရနိုင်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါအတိုင်းပြုပါ -
ပထမ ဦး စွာ BIOS ထဲသို့ ၀ င်ရန်လိုအပ်သော key ကိုနှိပ်ပါ။ မည်သည့်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရမည်ကိုသင်မသိပါကအင်တာနက်ပေါ်တွင်သာရှာဖွေပါ။
ဒုတိယအနေနဲ့ SATA type or mode ကို AHCI ထားပါ။
သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်အပြာရောင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရပြီး ACHI ကိုဖွင့်ပြီးနောက် Windows သည် boot မလုပ်လျှင်၊ အောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်ပါ။
BOIS ရှိ AHCI သို့ IDHC သို့ RAID သို့ပြန်သွားပါ။ ထို့နောက် Windows သည် bootable ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မည်။
ပြီးရင် Regedit.exe ကိုဖွင့်ပြီး HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesmsahci ဆီကိုသွားပါ။
ထို့နောက် Start ၏တန်ဖိုးအချက်အလက်ကို0သို့ပြောင်းပြီး“ OK” ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် regedit.exe မှထွက်ပြီးကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။ BOIS ထဲ ဝင်၍ AHCI ကိုထပ်မံဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့နောက် Windows သည်အောင်မြင်စွာ boot တက်သင့်သည်။
သိကောင်းစရာ ၄ - C Drive ကိုချဲ့ပါ
C drive သည်အနည်းဆုံး ၁၀% နေရာလွတ်ရှိသင့်ပြီး၎င်းသည်ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုနှုန်းကိုပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ Windows Disk Management utility သည် drive C ကိုချဲ့ရန်ခွင့်မပြုပါက၊ ဥပမာ၊ Extend Volume အင်္ဂါရပ်အရောင်ဖျော့နေပါက၊ C. တိုးချဲ့ရန်ရှိပြီးသားအခန်းကန့်သို့မဟုတ်အသုံးမပြုရသေးသောနေရာမှနေရာလွတ်ယူနိုင်သော MiniTool Partition Wizard ကိုဖွင့်ပါ။
ထို့နောက်အခြားအခန်းကန့်များ (သို့) မခွဲရသေးသောနေရာမှနေရာလွတ်ယူပြီး C ကိုချဲ့ရန်နေရာလွတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လျှောလက်ကိုင်ကိုဆွဲယူပါ။
နောက်ဆုံးတွင်ဤပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်ရန်“ Apply” ကိုနှိပ်ပါ။
သိကောင်းစရာ ၅ - SSD ကို Defrag လုပ်မထားပါနဲ့
USB flash drive ကဲ့သို့ SSD သည်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့် HDD နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချက်အလက်များကိုလျင်မြန်စွာဖတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖိုင်အပိုင်းအစများအားလုံးကိုအတူတကွစုဆောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ Defragging သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမတိုးတက်စေဘဲဆန့်ကျင်စွာအနေဖြင့်၎င်းသည်မလိုအပ်သောရေးသားမှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ၎င်းသည် SSD သက်တမ်းတစ်ချိန်ချိန်အထိအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
(၆) Write Cache ကို Enable လုပ်ပါ
HDD နှင့် SSD အသုံးပြုသူများသည် write cache ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Write cache ကို enable လုပ်ပြီးအမြန်တည်ငြိမ်သောမတည်ငြိမ်သော memory ကို disk drive သို့ပေးပို့သော write command များကိုစုဆောင်းရန်နှင့်သိုလှောင်ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတော်အတန်တိုးတက်စေနိုင်သည်။
Write Cache ကို Enable လုပ်နည်း
Device Manager သို့သွားပြီး Disk Drives ကိုချဲ့ပါ။ SSD ကိုညာဘက် နှိပ်၍ Properties ကိုရွေးပါ။ Policies tab အောက်ရှိ“ Device ပေါ်တွင် write cache ကို Enable” ရွေးပါ။
SSD မှအများဆုံးရယူရန်အကြံပြုချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ပါ Windows 10/8 / 8.1 /7တွင် SSD မှအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရအောင်.
ကောင်းပြီ၊ SSD ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး HDD ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့စီစဉ်နေပါသလား။ ဟုတ်လျှင်၊ ဤအချက် (၆) ချက်အားဖြင့်သင်၏ HDD ကို SSD သို့အဆင့်မြှင့်ပါ။
နည်းပညာ၊ ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ / ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ သံတမန်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လူ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွဲမှတ်သွားသည်။